1. Maka ụfọdụ ndị ọrụ Mac ndị na-amabeghị otu esi ewepụta nseta ihuenyo ma ọ bụ kpọọ ya nseta ihuenyo. N'ihi na ndị na-achọ ụzọ weghara screenshots, ị ga-agụ isiokwu a .. Maka ile foto nke windo windo niile ma ọ bụ naanị akụkụ nke ihuenyo ahụ Ọ bụghị dị ka ike dị ka ị na-eche! Etu esi enweta nseta ihuenyo na Mac Otu n’ime igodo kachasị mkpa anyị ga-eji bụ: ● iwu ● ịgbanwee ● nọmba 3 ● nọmba 4 ● nọmba 6 ● ohere ebe eji igodo ndị a rụọ ọrụ. Na otu esi enweta ya n'ụdị Mac niile dịka Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini. Ka anyị gaa n’ihu na ụfọdụ ụzọ iji nweta screenshots. Kedu nke ịchọrọ iji pịa n'otu oge? Ma enwere usoro ọ bụla nke anyị nwere ike isi nweta nseta ihuenyo?
2. Weghara onyonyo ahụ ebe ị chọrọ ya site na ịhazi mpaghara ya. Pịa ma jide igodo Iwu na Mgbanwe ma pịa nọmba 4. Mgbe a pịa ya n'otu oge, Mac gị ga-egosi akara +, wee pịa ma jide òké ahụ wee dọrọ ebe achọrọ Foto ahụ Mgbe achọrọ ebe achọrọ, hapụ òké ahụ, dabara maka mgbe anyị chọrọ ijide otu ebe. Mgbe ị nụrụ ụda "snap", ọ pụtara na njide ahụ ezuola. Ihe oyiyi ahụ weghaara ga-echekwa na desktọọpụ ozugbo.
3. Seta ihe oyiyi nke windo dị ugbu a. Iji pịa ma jide igodo Iwu na Mgbanwe, pịa nọmba 4 ma hapụ aka niile. Soro site na Spacebar (+ ga-apụta ma ọ bụrụ na ịnweghị pịa oghere) mgbe ị na-akpụ onyinyo igwefoto. Pịa na windo achọrọ iji jide ihe oyiyi ahụ, nke kwesịrị ekwesị iji wepu windo ụfọdụ nke ngwa ọ bụla. Mgbe ị nụrụ ụda "snap", ọ pụtara na njide ahụ ezuola. Ihe oyiyi ahụ weghaara ga-echekwa na desktọọpụ ozugbo.
4. Were nseta ihuenyo nke Mac niile na ihuenyo zuru oke Iji mee nke a, pịa ma jide igodo Command na Mgbanwe, wee pịa nọmba 3. Nke a ga-enye gị ohere iji nweta ihuenyo zuru oke. Ihe niile mepere na ihuenyo ahụ ga-egosipụta kpamkpam. Adabara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihuenyo niile. Mgbe ị nụrụ ụda "snap", ọ pụtara na njide ahụ ezuola. Ihe oyiyi ahụ weghaara ga-echekwa na desktọọpụ ozugbo.
5. Were foto nke Touch Bar na MacBook Pro nke na-abịa na Touch Bar, ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eji MacBook Pro nke na-abịa na Touch Bar, ọ ga-adị ntakịrị n'ihi na Mac nwere ike iwe nseta ihuenyo nke Touch Bar kwa !! Chaị. Otu esi pịa ma jide igodo Iwu na Mgbanwe ma pịa nọmba 6 mgbe ị nụrụ ụda "Snap" pụtara na njide ahụ ezuola. A ga-echekwa onyonyo ahụ weghaara na Desktọpụ ozugbo, usoro ọzọ bụ ịtụ aro na ọ bụrụ na ịchọrọ idezi onyonyo ahụ weghaara ozugbo, ị nwere ike ime ya mgbe okpu ahụ gwụchara, n'ihi na Mac ga-egosi anyị ihe oyiyi ahụ tupu ịchekwa ya na Desktọpụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ide ma ọ bụ chọọ kaa akara dị mkpa Enwere ike idozi ya ozugbo, ọ ga-adịrị onye ọ bụla chọrọ ịmata usoro ndị ọzọ nke iji Mac, echefula ịpị ma soro ọnụ. Gbaa mbọ hụ na ị nwere ọtụtụ usoro dị mma!